Cele Seven – Page 15 – Just another WordPress site
မေၾကးစည္ ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ အေတာ္ဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့သူ ႏွစ္ဦးကို ေျပာျပလိုက္တဲ့ ဒါရိုက္တာ ေမာင္သီ….
ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင် မင်းသားကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လွင်မိုး နဲ့ အစ်ကို တော်စပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သီ ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ Myanmar Got Talent ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဒိုင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ‌ မောင်သီ ဟာ …
March 1, 2022 By LY C Celebrity
တာဝန္မေၾကတဲ့ သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖခင္ရဲ့ေနာက္ဆုံးမွာ ေျပာၿပီးေၾကကြဲေနရွာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရန္လင္းေအာင္…..
ပရိတ်သတ်ကြီးရော မကြာသေးမီက ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့တဲ့ “ စေတလုံးမောင်ဘုန်း ” ဇာတ်လမ်းတွဲ ထဲက ဗီလိန် နေရာ မာဃ အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ ရန်လင်းအောင် ကို သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါနော် ။ရန်လင်းအောင် ရဲ့ …
February 27, 2022 By LY C Knowledge
အရမ္းလွပေနတဲ့ ေမေမပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ပရိတ္သတ္ေတြကို ခ်ျပလိုက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ယြန္းယြန္း…..
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူအချစ်တော် သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေလည်းရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာသရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းကသူမရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတစ်ချို့ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေခနတာပျောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သရုပ်ဆောင်ယွန်းယွန်းရဲ့အမာခံပရိသတ်တစ်ဦးက ညီအစ်မတွေလားထင်ရလောက်တဲ့ ယွန်းယွန်းမေမေရဲ့ပုံလေးတွေကိုမျှဝေထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ယွန်းယွန်းတို့ သားအမိ ကိုလည်းအားပေးစကား ပြောခဲ့ပါအုံးနော်…။ Credit…. ZAWGYI ပရိသတ္ႀကီးေရ ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ယြန္းယြန္းကေတာ့ငယ္စဥ္ကတည္းက …
February 27, 2022 By LY C Celebrity
ငါးဝယ္ၿပီး အေႂကြးမေပးတဲ့ အဆိုေတာ္ ခ်စ္ေကာင္းကို ဖုန္းနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းႀကီးေျပာခ်လိုက္တဲ့ ငါးဆိုင္ ပိုင္ရွင္……
တစ်ချိန်ကသူ ရဲ့ သီချင်းတွေက လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား ခဲ့ပြီး ပြန်ဆိုတေးတွေတောင် ရှိခဲ့တာကတော့ အဆိုတော် ချစ်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီးခုချိန်ထိ လေးစားခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပရိသတ်တွေ နဲ့ ဝေးကွာခဲ့ ပြီး …
February 24, 2022 By LY C News
ပရိသတ္ေတြရဲ့ခ်ီးက်ဴးအားေပးမႈကို ရရွိေနတဲ့ ေမမီကိုကို အတြက္ သူမရဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြျပဳလုပ္ေပးတဲ့ Surprise ပြဲေလး
ပရိသတ်ကြီးရေ MRTV-4 သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ မေမီကိုကိုကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမီကိုကိုဟာ လက်ရှိမှာလည်း “မကြေးစည်” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ အောင်မြင်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို တစ်ခဲနက်ရရှိပိုင်ဆိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
February 24, 2022 By LY C Knowledge
အဆင့္အတန္းမခြဲျခားဘဲ အိမ္အကူညီမေလးကို မိသားစုလိုေမြးေန႔ပြဲေလးလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ စိုးျပည့္သဇင္…
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်က ငယ်စဉ်က တည်းက အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ယနေ့ထက်တိုင် အကယ်ဒမီဆုရှင် မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်ပြီး ဖြူစင်စွာ လှတဲ့ စိုးပြည့်သဇင် က သူမရဲ့အပြင်က …
February 24, 2022 By LY C Celebrity
မေန႕ညကဖမ္းဆီးခံလိုက္ရတဲ့ သင္းသင္း နဲ႕ပတ္သက္တဲ့သတင္းေကာင္းတစ္ခုကို ဝမ္းသာအားရနဲ႕ေျပာျပလာတဲ့ စူးရွထက္
င္ငံေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ညေဝဠဳေက်ာ္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးပရိသတ္ေတြၾကားေရပန္းစားၿပီးခုဆို အားေပးတဲ့ပရိသတ္ေတြရရွိထားတာကေတာ့ သင္းသင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ေဝဖန္မႈေတြမ်ားစြာခံခဲ့ရေပမယ့္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပရိသတ္ေတြလက္ခံလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ လည္းပရိသတ္ေတြအတြက္အလုပ္ေတြကိုႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အလွမယ္သင္းသင္းကေတာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္မေန႔ညကစကစမွဧည့္စာရင္းစစ္မယ္ဆိုၿပီးမတရားဖမ္းဆီးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့အလွမယ္သင္းသင္းျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီလို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္စူးရွထက္ကသူမလူမႈကြန္ရက္မွာေျပာျပလာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စူးရွထက္ ကသတင္းေကာင္းခုမွပဲေပ်ာ္ရေတာ့တယ္ဆိုၿပီးေျပာျပလာၿပီး comments တြင္လည္းမသင္းျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီလို႔ေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသတင္းသာအမွန္ပဲဆိုရင္ေတာ့ သင္းသင္းအတြက္ အင္မတန္ပဲဝမ္းသာပါတယ္ေနာ္.။ခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ဆုေတာင္းေတြေၾကာင့္သင္းသင္းျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အတြက္ မိသားစုနဲ႕ထပ္တူဝမ္းသာရပါတယ္ေနာ္။ Credit နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်ညဝေဠုကျော်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားပြီးခုဆို အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရရှိထားတာကတော့ သင်းသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
February 23, 2022 By admin Celebrity
ေက်ာက္မ်က္ရတနာသင္တန္း တက္ဖို႔ ဒူဘိုင္းကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနျခည္ဦး ရဲ့video……..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ နေခြည်ဦးဆိုတာ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့မရှိသလောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Cele တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Beauty Blogger လောက ကနေအားပေးမှုများစွာနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။အချိန်တိုအတွင်းမှာ တင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး ခဏလေးအတွင်း နာမည်ကြီးအောင်မြင် သွားတာပါ။ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုတွေ …
February 23, 2022 By LY C Knowledge
ခ်စ္ရတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ တကြရွိေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ စိုးျမတ္နႏၵာ…
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ စိုးညီအစ်မတွေ လို့‌ ပြောလိုက်တာနဲ့ မသိသူ မရှိရလောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေ ကို ယူထားနိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာကတော့ အနုပညာလောက မှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကကနေအနားယူပြီးနောက်ပိုင်း ညီအစ်မတွေ နဲ့ …
February 23, 2022 By LY C News
ပုပၸါးေျမေပၚမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပရဟိတမင္းသား ေဝဠဳေက်ာ္ရဲ့ မဂၤလာပြဲကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ား…
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသားကြီး ဝေဠုကျော် ကတော့ တစ်ခေတ် တစ်ချိန်ကတည်းက အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝေဠုကျော်က သဘာဝကျပီပြင်လွန်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ နဲ့ အတူ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အသက် ဝင်လာအောင် …